Akhriso:Musharax Madaxweyne 2016 Maxamed Cabudllaahi Nuur Guuleed Iyo Barnaamijkiisa Siyaasadeed. | Wararka Jubbaland
Akhriso:Musharax Madaxweyne 2016 Maxamed Cabudllaahi Nuur Guuleed Iyo Barnaamijkiisa Siyaasadeed.
May 23, 2016 - jawaab
Anigoo ah (Magacaygu waa) Maxamed Abdulaahi Nur waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho. Waxaan ahay xaasle, waxaan yagleelay hawlo la xiriira ganacsiga iyo arrimaha bulshada anigoo leh khibrad muddo dheer u leh arrimaha shirkadaha ganacsiga gaarka ah iyo ganacsiga caalamiga ah labadaba kaasoo aan kusoo dhexjiray muddo ka badan 20 sano.
Sidoo kale, waxaan ahay qof si fiican u aamminsan abuuritaanka fursado shaqo iyo maalgashi laga hirgeliyo dalka Soomaaliya. Hadda waqti-xaadirkan waxaan ahay Maareeyaha Guud Kooxda Shirkadaha ee lagu magacaabo City Garden Group taassoo qaabbilsan hawlaha la xiriira Maareynta Shixnadaha Badeecooyinka Diyaaradaha, Warshadeynta iyo Soo-dhoweynta. Sidoo kale waqti-xaadirkan waxaan ahay Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Tanzaaniya, taasoo ah urur jaaliyadeed oo ujeeddadiisu tahay in xubnaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Tanzaaniya, kuwaasoo tiradooda lagu qiyaaso ilaa 25,000 qof.
Qorshe-hawleedka aan ugu talo-galey Soomaaliya waxa uu qeexayaa talo-soojeedin loogu talo-galey xaqiijinta isbaddal ka hana-qaada dalkeenna. Waxaan rajeynayaa inaad si qotodheer u akhrisan doontaan talo-soojeedinta kadibna aynu gacmaha is-qabsan doonno si aynu uga qeyb-qaadanno dadaalladan looga gol-leeyahay dhisitaanka Soomaaliyada cusub.
Waxaan rajo iyo ifafaale fiican ka aamminsanahay mustaqbalka dalkeenna, waxaan amminsanahay awoodaha xad-dhaafka ah ee ku qarsoon dadka Soomaaliyeed, kartidooda dhinaca hawlgudashada, hal-abuurkooda iyo hammiga ay u qabaan lahaanshaha ganacsiga gaar ahaaneed. Sidaasoo ay tahay haddana,waxaa dalkeenna xakamo adag ku qabtey oo dhaxalsiisay inuu muddo dheer dib ugu dhaco sabab hoggaan xumo, qabyaalad iyo argagixiso.Tobankii sano ee ugu danbeeyey waddamo kale oo ka mid ah qaaradda Afrika ayaa ku tallaabsadey hormar, hase ahaatee innaga muddo ka badan labaatan sano waxay nooga luntay oo aan waxba u qabsan weynay hoggaan xumo darteed. Inkastoo aynu iska leenahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, haddana weli dadweynaha Soomaaliyeed loogama faa’iideynin khayraadkeenna dabiiciga ah. Waxaa arrin laga naxo ah in boqolkiiba 40% dadka Soomaliyeed ayna gaarin 60 sano taasoo ay keentay duruufahooda nolosha ee saboolnimo.
Xukuumaddu waxay ku hawlan tahay danaha dad kooban – iyadoo dhanka kale ku guuldarreysatay inay siiso adeegyada aasaasiga ah ama xataa nabadgelyo ay ku noolaadaan dadweynaha Soomaaliyeed ee caadiga ah. Qaabka daciifnimada iyo dhabaqsanaanta ah ee ay dawladdu ula tacaaleyso kooxda Alshabaab, waxay si aan shaki ku jirin qof walba ugu muujisay in dawladda Soomaaliya ay tahay mid aan habsami u-shaqeyneynin.Waxaan qabaa in la joogo waqtigii la jeexi lahaa jiho cusub, waxaa la joogaa waqtigii dawladeenna loosoo celin lahaa garashada maskaxeed, sidoo kale waxaa lasoo gaarey xilligii dib loo yagleeli lahaa kalsoonida ay dadweynuhu ka qabaan arrimaha siyaasadda. Annagu waxaan haynaa Aragti cusub oo aan ugu talo-galney hormainta Soomaalida –,
annagoo higsaneyna inaan ka dhigno dal horumarsan oo qof-kasta oo muwaadin ahi awood u leeyahay inuu ku noolaado cabsi la’aan la xiriirta dhinacyada faqriga iyo nabadgelyada. Aragtidan cusubi waxay ku saleysan tahay in la helo Dawlad cusub oo ay ka go’an tahay maareynta dhibaatooyinka haysta dalka iyo ka-faa’iideysashada fursadaha la heli karo. Sida ku cad aragtideena cusub, dawladda cusub ee la iman karta qaab wax lagu maareyn karo waa mid si habsami ah u fulineysa hawlihii loo igmadey halkii ay ku mashquuli lahayd waxyaabo kale oo aan dani ugu jirin.
Shaqada looga baahan yahay inay dawladdu qabato waa inay tahay mid ku saleysan qorshe-hawleedyada afarta ah ee hoos ku qoran –
1. Maamul Wanaag – Mamul Wanaag, Midnimada Qaranka, Waxsoosaarka Dhaqaalaha Iyo Dib-u-dhiska Qaranka
2. Dhaqaalaha – Dardar-gelinta Hormar Waara Taasoo lagu gaarayo Kordhinta Maalgeshiga Tooska ah.
3. Cadaaladda – Dhisitaanka Umad ay ku weyn tahay xushmadda loo qabo Nidaamka iyo Kala-danbeynta Sharciga Iyo Garsoor ay Dadweynaha oo dhan u siman yihiin
4. Daryeel Bulsho oo Wanaagsan – Muwaadin Soomaaliyeed oo Wax-bartay, Caafimaad qaba Isla mar ahaantaana hantiile ah
Marka la tixraaco Qorshe-hawleedka aan ugu talo-galney inaan ka hirgelinno Soomaaliya waxaa muuqaneysa inaan soo bandhigney sida aan ku gaari karno isbaddal dhab ah – hadda waqti-xaadirkan waxaan dooneynaa inaan ka dhabeyno isbaddalka aan ku dooneyno inaan kusoo gudbinno dawlad wax-ku-ool ah annagoo kaashaneyna taageeradaada shakhsi ahaaneed.
Inta badan dhibaatooyinka Soomaaliya waa kuwo si fudud loo dareemi karo – sidoo kale inta badan qaababka xalka ee lagu maareynayo mashaakiilkaasi waa kuwo fudud oo la wada garan karo.
Istiraatijiyaddeenu waa mid fudud hase ahaatee ay geesinmo ku dheehan tahay. Dawladda aan hormuudka ka nahay waxay billaabi doontaa adeegyada aasaasiga ah ee la xiriira waxyaabaha ka khaldan inay hawluhu si habsami ah u shaqeeyaan.
Waxaan soo afjari doonnaa musuqmaasuqa baahsan ee ka jira dhamaan qeybaha nolosha, anagoo kordhin doona maalgeshiga kaabayaasha aasaasiga ah iyo adeegyada dadweynaha. Waxaa kale oo intaa dheer inaanu billaabi doono nidaamka dhaqaalaha dhabta ah si ay suurtagal u noqoto inaan muddo hal sano gudaheed ah ku abuurno shaqooyin cusub si meesha looga saaro faqriga baahsan kaasoo ka dhigan boog ku taalla umaddeena. Sidoo kale, yagleelitaanka nidaam dhaqaale oo casri ah iyo isku-dhafka dhaqaalaha si aynu u xoojinno kartideenna waxqabasho.
Waxaanu rumeysannahay in arrimahan la hirgelin karo sababtoo ah dadka Soomaaliyeed waxay haystaan waxyaabo badan oo ay ka faa’iideysan karaan, ugu yaraan kheyraadka dabiiciga ah ee aynu hodanka ku nahay iyo hal-abuurka iyo mashaariicda ganacsiga dadweynaha.
Xukuumaddu waxay si habsami ah u qaabeyn doontaa kheyraadkeenna dabiiciga ah waxayna dalka dib ugu soo celin doontaa fursadihii laga heli jiray barnaamijyada abuuritaanka shaqooyinka dadweynaha taasoo suurtagelineysa dib-udhis lagu sameeyo kaabayaasheenna aasaasiga ee la dayacay – jidadkeenna, abuuritaanka awoodda korontada iyo guriyeynta. Marka hawshan iyada ah lagu guuleysto, kaabayaashan cusubi waxay gacan ka geysan doonaan dardar-gelinta hormarinta waaxaha kordhinta kobaca qiimaha, gaar ahaan sameynta warshadaha & beeraha.
Tani waxay horseedaysaa in warshadaha cusubi ay abuuraan malaayiin shaqo oo muddada dheer ah kuwaasoo laga helayo mushahar fiican – sidoo kale waxay noqonayaan il dhaqaale oo wax lagu maalgelin karo taasoo laga heli karo adeegyo habboon sida adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo daryeelka.
Qorshe-hawleedkeenu waa mid higsanaya yool fog, wuxuuna u baahan yahay shaqo adag iyo nidaam la raacayo sidaasoo ay tahay haddana waxaaan ku qanacsannahay in haddii la helo wadajir Soomaalinimo, inaan wax qaban karno maxaa yeelay annagu dadka uma balalanqaadeyno inaan dhulka korkiisa iyagoo ku nool aan wax walba ka dhigeyno sida jannada oo kale, kaliya waxaan dooneynaa in nidaamka dawladnimadu uu si habsami ah u shaqeeyo.
Annaga oo ka ambaqaadeyna arrintan ayaan soo bandhigeynaa Qorshe-hawleedkan aan ugu magac-darney ‘’Qorshe-hawleedka Mustaqbalka Soomaaliya!’’.Qorshahani wuxuu ka dhigan yahay Qandaraas Daacadnimo ku dheehan tahay oo Cusub kaasoo lala gelayo dadweynaha Soomaaliya. Sidaa awgeed arrinta dhamaanteen aynu waajahayno ee la doonayo inaynu go’aan ka qaadanno waxay tahay bal inaynu hubsanno inuu jiro rabitaan waafi ah iyo dhiirranaan ka dhex-jirta dadweynaha taasoo la xiriirta arrimaha midnimada, fulinta hawsha iyo xaqiijinta isbaddal hoosta laga soo bilaabay, casriyeynta iyo hormarinta dalkeenna – iyadoo aan loo baahneyn inaynu dib u milicsanno siyaasadihii iyo qaababkii shaqo ee horey loogu guul-darreystay. Hadda arrintu maaha arrin u baahan kala-xulasho ee waa mid u baahan rabitaan iyo dhiirranaan.
Qorshe-hawleedkan siyaasadeed waxa uu jaangoynayaa dadaalka aynu ku higsaneyno gaaritaanka yoolkeenna: Waa mid ku saabsan nooca isbaddal ee uu mudane Maxamed Cismaan doonayo inuu ka hirgeliyo dalka Soomaaliya. Waxaanu dareensannahay in annaga oo kaliya aanaan awoodi karin fulinta hawshan,waxaan garwaaqsannahay baahida aan u qabno ka qayb-qaadasho mug leh oo aan ka helno shacabkeenna qaaliga ah. Qeybta hoose waxaan ku faah-faahineynaa afarta qodob ee saldhigga u ah Qorshe-hawleedkeenna aan ugu talo-galnay inaan isbaddal wacan kaga dhalinno dalka Soomaaliya, adigoo si fiican uga dheehan doona arrinta aan sida gaarka ah diiradda u saari doono oo ah hormarinta hantida ugu muhiimsan ee aynu leenahay – taasoo ah idinka shacabweynaha Soomaaliyeed.
Inta lagu jiro xilliga ugu horreeya ee ay xukuumadeydu xilka hayso waxaan qaban doonaa arrimahan:
• Shaqo Shaqo Shaqo – Abuuritaanka fursado shaqo oo cusub sannad-kasta taasoo loo adeegsanayo barnaamijyada la xiriira hawlaha guud iyo in dhaqaalaha loo baddalo nidaamka kordhinta kobaca qiimaha waxsoosaarka.
• Nabadgelyada – Shaqaaleysiinta saraakiil boolis dheeraad ah iyo sameynta Laanta Ka-hortagga Argagaixisada oo si fiican u tababaran isla mar ahaantaana si fiican u qalabeysan si ay u burburiyaan Alshabaab – kordhinta mushaharka dhamaan 5ta laamood ee ku hawlan arrimaha ammaanka.
• Musuqmaasuqa – In la hirgeliyo nidaam mamnuucaya gebi ahaanba musuqmaasuqa iyadoo la jiheynayo shaqaalaha madaniga ee aan lagu kalsooneyn iyo in lagu soo rogo cunaqabateyn adag taasoo ay ku jirto xukun xabsi ah.
• Dhallinyarada – Dib-u-dhiska iyo dayactiritaanka jaamacadihii dawladdii hore iyo bixinta adeeg waxbarasho lacag la’aan ah oo heerkoodu yahay mid jaamacadeed
• Waxbarashada – Dib-u-dhiska iyo dayactiritaanka dugsiyadii hoose/dhexe iyo kuwii sare ee dawladdii hore iyo bixinta adeeg waxbarasho lacag la’aan oo heerkoodu yahay mid hoose/dhexe iyo mid sare.
• Caafimaadka–Dhisitaanka shabakad ka kooban xaruumo caafimaad oo maxalli ah kuwaasoo bixin doona adeegyo caafimaad iyo daawooyin lacag la’aan ah oo loogu talo-galey dadweynaha.
Waxaan Ilaahey Ka baryaaya in uu dalkeena and dadkiisa nabad iyo barqaaqo waaro.
Musharax Mohamed A Nur